Haleellaan humna xiyyaaraa fi humna lafoo meeshaalee waraanaa gurguddaa halaalaa furguggisuun, Oromoo Walloo irratti raawwatamu jabaatee itti-fufee jiraachuu. Addaan citiinsa ibsaa, bishaanii fi quunnamtii neetorkii daafii kanaan mudateenis, Uummanni Oromoo Walloo rakkoo hamaaf saaxilamee jiraachuu.
Sakattaa fi hidhaan hawaasa Oromoo Magaalaa Finfinnee keessa jiraatu irratti raawwaatamu akkaan hammaatee itti-fufee jiraachuu. Dabalataanis, jiraattonni Magaalaa Finfinnee naannoo ykn ganda isaanii [WBO irraa] akka tiksaniif jecha, keessattuu, bobbaa halkanii taasisuun gandarra naanna'aa [waardiyyaa dhaabbachaa] akka bulan dirqamsiifamaa jiraachuu.
Konyaa Walloo, Ona Jiillee Dhummuuggaa keessatti kan argamtu, Gandi Naannoytuu, Kamisa Sadaasa 18, 2021 har’aa, meeshaalee waraanaa gurguddaa halaalaa furguggifamanii fi boombii xiyyaara irraa gadi roobsamuun barbadeeffamaa ooluu; qabatamaattis, Oromoonni baay'inaan 14 ol ta’an lubbuun darbuu.
Haleellaan humna xiyyaaraa fi meeshaalee waraanaa gurguddaan, Uummata Oromoo Walloo hidhanno-maleessa irratti fuuleffachuun, Loltoota MKIIn raawwatamu jabaatee itti-fufuu. Haleellaa xiyyaaraa halkan edaa (Sadaasa 15, 2021) Magaalaa Sambatee irratti raawwatamaa buleen lubbuu, qaamaa fi qabeenya hawaasa Oromoo Walloo irra gaaga’amnii fi mancaafamni cimaan dhaqqabuu.
Dargaggoonni Oromoo jaha, Konyaa Baha Wallaggaa Ona Gobbuu Sayyoo keessatti Loltoota Mootummaa Koloneeffataa Impaayera Itoophiyaan ajjeefamuu. Dargaggoota ajjeefaman keessaa lama ganda Baafannoo jedhamu irraa qabamanii mana hidhaa Magaalaa Aannoo keessatti argamu keessatti hidhamuun dararamaa erga turanii booda Roobii Sadaasa 10, 2021 mana hidhaa keessaa baafamuun ajjeefamuun, reeffi isaanii bakkeetti kan gatame ta’uu.
Haleellaan humna xiyyaaraa fi meeshaalee waraanaa gurguddaa halaalaa dhukaafamaniin Uummata Oromoo Walloo hidhannoo-maleessa irratti fuuleffachuun raawwatamu jabaatee itti-fufuu. Haleellaa Magaalaa Sambatee fi gandeen baadiyyaa naannawa san jiran irratti guyyaa ha’aa raawwatamaa oleenis, lubbuu fi qabeenya Uummata Oromoo Walloo irra gaaga’amnii fi mancaafamni jabaan dhaqqabuu.